एक २० वर्षिया महिलाले पहिलो बच्चा जन्माएको २६ दिन मै फेरि जन्माइन् जुम्ल्याहा बच्चाहरु | SaraKhabar.com
एक २० वर्षिया महिलाले पहिलो बच्चा जन्माएको २६ दिन मै फेरि जन्माइन् जुम्ल्याहा बच्चाहरु
बङ्गलादेश : बङ्गलादेश कि एक २० वर्षिया महिलाले गत हप्ता शुक्रबार मात्र एक महिनाको अन्तरालमा तीन शिशुहरु जन्माएकी छिन् । पहिलो बच्चा जन्मिएको २६ दिन पश्चात् उनले पून: जुम्ल्याहा बच्चाहरु जन्माएकी हुन् । यो घटनाले चिकित्सकहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् । २६ दिन अघि पहिलो बच्चा जन्मिँदा उनीहरुले महिलाको गर्भाशयमा अन्य दुई जुम्ल्याह बच्चाहरु पनि भएको चाल पाएका थिएनन् । पहिलो बच्चा जन्मिएको केही दिनपछि फेरि महिलाको पेट दुखेपछि अस्पताल गई जचाउँदा मात्र डाक्टरहरुले यो कुरा थाहा पाएका हुन् ।
अरिफा सुल्तान नाम गरेकी ती महिलाले २६ दिन अगाडिमात्र सामान्य रुपमै एक छोरा जन्माएकी थिईन् । अरिफाकी डाक्टर डा. शिला पोद्दार भन्नुहुन्छ, 'पहलो डेलिभरी पश्चात् हामीलाई यो विषयमा केही पनि थाहा भएन । पेट दुखेर जब अरिफा दोस्रो पटक हाम्रोमा आईन् र हामीले उनको अल्ट्रासोनेग्राफी टेस्ट गर्यौं तबमात्र उनको पेटमा दुई गर्भाशय रहेको कुरा खुल्न आएको हो ।'
त्यसपछि तत्काल अपेरसन गर्ने फैसला लिइएको पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पोद्दारले बताईन् । अरिफाले एक छोरी र एक छोरा जुम्ल्याहा बच्चाहरु जन्माइन् । हाल तीनै बच्चा र आमा स्वस्थ छन् । सरकारी चिकित्सक प्रमूख दिलिप रोयले आफ्नो ३० वर्षको अनुभवमा यस्तो घटना कहिल्यै नदेखेको बताएका छन् । रोयले मेडिकल कलेज अस्पतालका चिकित्सकहरुले शुरु मै महिलाको दोस्रो गर्भाशय र जुम्ल्याहा बच्चाहरुको विषयमा किन थाहा पाएनन् भनि प्रश्न गरेका छन् । डा. रोय भन्छन्, 'पहिलोपल्ट छोरा भयो र दोस्रो पटक एक छोरा र एक छोरी जुम्ल्याहा बच्चाहरु जन्मिए । पहिलो बच्चा पहिलो गर्भाशयबाट र जुम्ल्याहा बच्चाहरु दोस्रो गर्भाशयबाट जन्मिएका हुन् । यो निकै अनपेक्षित घटना हो ।' अस्पतालमा सबैलाई मंगलवार बिदा दिइएको थियो ।
अरिफाका श्रीमान सुमोन बिश्वास भन्छन्, 'यस्तो घटनामा पनि आमा र सबै बच्चाहरु स्वस्थ रहनु एक ईश्वरिय चमत्कार नै हो । म एक मजदुर हुँ र दिनभर श्रम गरेर महिनाको ६ हजार कमाउँछु । तर यति कम पैसामा अब मैले कसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो मलाई थाहा छैन । यद्यपि सबैलाई सधैं खुशी राख्ने मेरो सदा कोसिस रहनेछ ।'